MIBVUNZO - Sekonic Metals Technology Co, Ltd.
Nickel Yakavakirwa Alloys
Monel mazana mana
Incoloy chiwanikwa 31
Cobalt Yakavakirwa Alloys
Haynes 25 (Chiwanikwa L605)
Invar chiwanikwa (4J36)
Kovar chiwanikwa (4J29)
Nyoro Magnetic chiwanikwa
Chiwanikwa 50 (1J50)
Yakakosha Stainless Simbi
Zvinyorwa 50 (Xm-19)
Titaniyamu Capillary Tube
Titanium Pipe uye Tube
Titanium Strip uye Foil
Titanium Sheet uye Plate
Bhawa & Tsvimbo
Bolts & Zvinosunga
Yakakwira Temperautre Chitubu
Runhare: + 86-511-86826607
Mhoroi, Une Mibvunzo, Tine Mhinduro
Kana iwe uine mubvunzo, isu tiri pano kuzobatsira. Tarisa uone inotevera inowanzo bvunzwa mibvunzo kuti uone kana vamwe vari kubvunza zvakafanana chinhu. Tinodawo kuda kunzwa kubva kwauri, saka tipe runhare pa + 86-0511-86826607 kana zadza fomu pane redu rekubata nesu peji.
Imhandoi yeruzivo iwe yaunoda kubva kwandiri kuti upe iyo chaiyo quote?
Ruzivo rwakawanda, zvirinani. Nekudaro, izvo zvinhu zvinotevera zvinogona kuve nechokwadi chekuti tinokupa iwe nenguva uye chaiyo quote: Iyo yekudhirowa kana yakadzama zviyero, alloy, zviyero, yaunoda nguva yekutungamira kana zuva rechikepe, uye maratidziro. Ndokumbira utarise kuti zvirevo zvinosanganisira kuyedza zvinodiwa, zvitupa, kurongedza, uye chero zvakakosha zvaungave nazvo. Inzwa wakasununguka kubvunza yako Inside Sales Injiniya kana uchikahadzika
Chii chako chidiki cheodha odha?
Isu tinoratidzira iyo MOQ yechinhu chimwe nechimwe mune chitaurwa pepa. Isu tinobvuma muyenzaniso uye kuyedza kurongeka. Kana huwandu hwechinhu chimwe chete husingakwanise kusvika paMOQ, mutengo unofanirwa kunge uri muyenzaniso mutengo.
Ndeapi marongero akajairwa ako anosangana nezvinhu?
Sekonic Metals zvinhu zvinowanzozivikanwa kuASMM, ASME, AMS, GE, uye Pratt & Whitney specs, pamwe nevamwe. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve zvakatemwa, taura neMumiriri Wekutengesa.
Ndezvipi zvitupa zvaunazvo?
Chinyorwa chega chega kana zvigadzirwa, isu tichapa Mill bvunzo chitupa (En 10204.3.1 kana EN10204 3.2 inowanika) Chechitatu bato kuongorora bvunzo zvakare inogona kupihwa kana iwe uchida!
Ndeipi garandi yezvigadzirwa zvedu?
Isu tine edu akateedzana ekuongorora michina yekudzora yega yega yekugadzira nhanho yezvigadzirwa zvedu, kubva pane zvakasvibirira kusvika kumagumo zvigadzirwa (bha, bhaudhi, pombi, waya, jira, flange, chitubu) kugadziriswa kwega kwega kunogona kuteverwa nedhipatimendi redu remhando yepamusoro. kusaenzana zvigadzirwa mushure mekuyedza, isu tinotsiva kana kubhadhara kwauri, mari yekutumira kumagumo!
Ndeapi anotakura zvinhu anoshandiswa neSekonic Metal?
Sekonic Metals ine zvibvumirano nevanoverengeka vanozivikanwa munyika vatakuri vekutakura zvinhu, wako anotungamira anotenderawo!
Kurongedza kunze kwenyika kunowanikwa here?
Sekoinc Metals inogona kurongedza odha yako yekutumira kunze kune imwezve mari. Dzvanya apa kuti uone zvakajairwa kurongedza, tinya pane live Chat , kana kuti bvunza Mutevedzeri Wekutengesa kuti uwane rumwe ruzivo.
Ndeapi ruzivo rwakakodzera wandinofanira kuisa pane yangu Yekutenga Order (PO)?
Ruzivo rwakawanda, zvirinani. Nekudaro, izvo zvinotevera zvinhu zvinoonekwa sezvine basa: hwakadzama kukura, chiwanikwa, huwandu, inodiwa nguva yekutungamira kana zuva rechikepe, uye zvirevo. Ndokumbira utarise kuti zvirevo zvinosanganisira kuyedza zvinodiwa, zvitupa, kurongedza, uye chero zvakakosha zvaungave nazvo. Inzwa wakasununguka kubvunza yako Inside Sales Injiniya nemibvunzo, kana kubata Corporate Sales ku 86-511-86826607
Ndeipi yako nguva yekutungamira (Nguva Yekutumira)?
Wako Anotengesa Injiniya achataura inotungamira-nguva yemubvunzo wega wega zvichienderana nekuoma kwechigadzirwa uye redu razvino basa. Tichaita zvese zvatinogona kuti tiite zvaunoda.
Ndingaite sei kuti ndione kuti ndeipi alloy yakanakira nharaunda yangu?
Kuti uwane ruzivo rwakadzama nezve alloy sarudzo, Ndokumbira utarise yedu Yezvinhu Zvekuita data, iwe unogona zvakare tinya paChat kana email nesu!
Unogona here Kugadzira zvigadzirwa zvakasarudzika?
Tinogona kuburitsa zvese zvakajairwa uye zvakasarudzika zvigadzirwa. Tinogona kuzviita zvinoenderana nemadhirowa ako uye masampuli.ndokumbira kuti utumire iwe kudhirowa kwatiri kuti tiongorore!
Ndingawane yangu odha yekushanda purogiramu?
Ehe, isu tinotumira rinoshanda purogiramu yako odha vhiki imwe neimwe. Tichaongorora uye kuyedza zvese zvinotengeswa kana zvakuvadza uye zvisipo zvikamu zvisati zvaendeswa. Iyo yakadzama yekuongorora mifananidzo yeodhi yacho ichatumirwa kwauri kune yako yekusimbisa usati waendesa.
Marii yaunobhadharisa yekutakura nekubata?
Nzvimbo yako uye huremu hweodha yako hunosarudza mitengo yekutakura.
Chii chandinoita kana mubvunzo wangu usina kunyorwa pano?
Iwe une mashoma sarudzo. Inzwa wakasununguka kutidaidza isu zvakananga pa + 86-511-86826607 kutaura neInside Sales Injiniya. Kana iwe uchida kuendesa mubvunzo wako uchishandisa fomu pane webhusaiti yedu, unogona kuzviita nekudzvanya apa. zvakare unogona kutitumira email info@sekoincmetals.com.
Runhare: + 86-15921454807
Kero: Western Feima Road, Liujiagang Town, Taicang Guta, Jiangsu Dunhu, China
Oiri Yekutenderera Hanger
Stellite 6, stellite mhete, Haynes 25 Waya, Chiwanikwa R26 bhaudhi, Welding waya, Stellite 6B,